» ‘हिमालयन-रि’लाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले दियो कारोबार थाल्ने स्वीकृति, उद्घाटन कहिले ?
२०७८ श्रावण १२, मंगलवार १९:५७
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले कारोबार सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । गत आवदेखि नै कारोबार थाल्ने भनेको कम्पनीले ढिला गरी कारोबार अनुमति पाएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले साउन १० गते कारोबार स्वीकृति, सेयर तथा सञ्चालक लगत अभिलेख गरेको पत्र पठाएको छ ।
कार्यालयले कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सञ्चालक दर्ता किताब प्राप्त भएको बताउँदै सबै काम कारबाहीको उत्तरदायी र जिम्मेवार कम्पनी तथा सञ्चालक हुने गरी कारोबार स्वीकृति प्रदान गरिएको बताएको छ ।
हिमालयन रिले केही व्यवसायसमेत आरम्भ गरिसकेको छ ।
विवादैविवादका माझ रिइन्स्योरेन्स कारोबार गर्न अनुमति पाएको हिमालयन रिले औपचारिक कार्यक्रममार्फत् कारोबार थाल्ने योजना नबनाएको बुझिएको छ ।
कम्पनीले बीमा समितिबाट कारोबारको अन्तिम स्विकृति पाइसकेको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले असार बिहिबार २४ गते पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र लगेको हो । कम्पनीका लगानीकर्तामा निजी क्षेत्रको छाता संगठनका नेताहरूको बाहुल्यता छ ।
हिमालयन रिको डेपुटी सीईओ एमके कपुर हुन् । कम्पनीको व्यवस्थापन नेतृत्व चन्द्र शेखरनले गर्ने बताइएको छ । उनीसँग भारतीय सरकारी इन्स्योरेन्स कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनमा काम गरेको अनुभव छ ।
हिमालयनले गत जेठ १६ गते नै पुनर्बीमा व्यवसाय चलाउने आशयपत्र पाएको थियो । त्यसयता बीमा समितिले हिमालयन रिका लगानीकर्ताले ७ अर्ब पुँजीको जोहो गरिसकेका छन् ।
१० अर्ब पुँजीको हिमालयन रिले संस्थापकका तर्फबाट ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
चार प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरुलाई पछि पार्दै लाइसेन्स हात पारेको हिमालयनको अध्यक्षमा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा हुन् ।
१०६ जना संस्थापक लगानीकर्ता रहेको हिमालयन रिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले ५०/५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसबाहेक अध्यक्ष शेखर गोल्छा, महासंघकै निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर, जगदम्बा ग्रुप, एमभी दुगड ग्रुप, दिपक भट्ट लगायतको लगानी छ ।
बीमा समितिले गत वैशाख १६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर एउटा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा काठमाडौं रि, अन्नपूर्ण रि, जेन्युइन रि, प्रुडेन्सियल रि र हिमालयन रिले आवेदन दिएका थिए ।
पाँच कम्पनीको प्रतिष्पर्धामा अन्यलाई उछिन्दै हिमालयनले बाजी मारेकामा समितिले तोकेको मापदण्डहरुमा सबै भन्दा धेरै अंक ल्याएर हिमालयनले लाइसेन्स पाएको बताइएको छ ।
बिमा समितिले २०७७ फागुन १५ गते नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै समितिका विज्ञ सल्लाहकार भोजराज शर्माको नेतृत्वमा बिमक संघका अध्यक्ष दिपप्रकाश पाण्डे र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुरज कुमार आचार्य सम्मिलित अध्ययन समिती गठन गरेको थियो । सो समितिले दिएको सुझाव अनुसार बीमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २१ दिन भित्र योग्यता पुगेका कम्पनीहरुले शिलबन्दी आवेदन दिन समितिले प्रकाशन गरेको सुचनाअनुसार पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
त्यसयता हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिइएकामा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी पनि परिसकेका छन् ।
हिमालय रिले १० प्रतिशत सरकारी आरक्षणको व्यापार पाउने भएको छ ।
हालसम्म सरकारी लगानी समेत रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसाय पाउँदै आएको छ । तर अब भने सरकारी लगानीको कम्पनीले पाउँदै आएको व्यवसाय खोसेर निजी कम्पनीलाई दिने अन्तिम तयारी गरिएको हो ।
हिमालयन रिले पायो नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स
४५ दिनभित्र ७ अर्ब तयार पार्न हिमालयन रिका प्रमोटरलाई बीमा समितिको पत्र
‘हिमालयन रि’ समुहलाई नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारी
हिमालयन रिका लगानीकर्ताले जम्मा गरे ७ अर्ब रूपैयाँ, असार भित्रै सेवा आरम्भ (कसको कति लगानी ?)
सरकारीबाट खोसेर निजी कम्पनी पोसिँदै, हिमालयन रिले पाउँदै १० प्रतिशत व्यापार